Gabadha Suna Gudeeska ah Saan ayaa lagu gartaa xaax ee dhehee hadiii gacanta laga taabto akhri - iftineducation.com
Gabadha Suna Gudeeska ah Saan ayaa lagu gartaa xaax ee dhehee hadiii gacanta laga taabto akhri
aadan21 / March 18, 2016
iftineducation.com – Marka gacanta ninka ay soo maamusho naashaha iyo shafka xaaskiisa waxay u degtaa dhinaca caloosha iyadoo salaaxeysa rugta xudunta dabadeedna u jiitameysa dhinaca cajarada iyo gumaarka halkaas bayna in muda ah ku noq noqotaa.
Marka xaaskaagu si wannagsan istiinka u qaato labadeeda bowda ayaa iskood u kala kaca wayna kala wadhaa,faruuryaha waaweynee cambarkana way kala fogaadaan ,qanjirradiisuna soo daaayaan dheecaan qooya cambarka gudihiisa oo idil.
Marka aad Dareento in Xaaskaagu aad u kacsantaghay lana jaan qaaday istiinka ayna kala dhacdo u gudub howshii cusleyd ee galmada weyn aheyd.
Sidee Loola Dhaqmaa Caruurta Madaxa Adag?
Naagta somali ugu kacsiga badan oo muuqal raga dhareer ka keenay soo duubtay…